စာမရေးတတ်ပါဘူး (ရေးသာရေးလိုက်ရင်တော့ဖြင့်အားပေးမယ့်ပရိတ်သတ်ကတစ်ပုံကြီးပါပဲ“ပြောင်းဖူး”မလောက်“ခဲ”မလောက်ပါပဲ:) သို့သော်လည်းကျွန်မမှာတတ်သလောက်မှတ်သလောက်လေး
(ကိုယ့်နာမည်ပါပါ၊မပါပါပေါ့နော် အတင်းပဲတဂ်၊အတင်းပဲရေးလိုက်ပါတယ်းP )
အစမှာတော့...မရေးဝံ့ပါဘူး..ကိုယ်ကဘာမှမှမဟုတ်သေးတာကိုး(ကလေးတွေကြားထဲဝင်မပါချင်တာလဲပါပါတယ်းP )
ကဲ..ကဲ Intro လေးဝင်ပြီးပြီဆိုတော့ စပြီးရေးပါတော့မယ်ရှင်..။
....................ဂျစ်..ဂျစ်..ဂျစ် (ကလောင်သွေးသံးD).........................
project လုပ်ရပါတယ်။အဲဒီ project အတွက်စာတွေရှာရင်းရှာရှင်းနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အစ်မရွှေစင်ဦးရဲ့ဘလော့ကိုသွား
နောက်အစ်မချစ်ကြည်အေး၊နောက်တော့ကိုပီတာ ၊နောက်တော်တော်တော်လေးများပါတယ်ရှင်.တော်တော့ကိုများပါတယ်...(ကျွန်မရဲ့ memory က 1G သာရှိတာကြောင့်
အလုံးစုံကိုမမှတ်မိပေမယ့်လို့ အားလုံးကိုတော့ဖြင့်အမြဲအမှတ်ရ၊သွားလည်နေဖြစ်ပါတယ်“မိစံ”ဆိုပြီးစီဘောက်တွေမှာလိုက်လိုက်အော်နေတာကျွန်မပေါ့ရှင် :P )
ဖန်တီးချင်တာနဲ့ google ထဲမှာရှာလိုက်တာကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ ဘလော့လုပ်နည်း pdf လေးသွားတွေ့ပါတယ်။(တော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပါတယ်
တော်တော့်ကိုကောင်းလွန်းတာကြောင့်(အမှန်ကတော့ proxy နဲ့ကျော်သုံးတာပါ) ကျွန်မအနေနဲ့ဒီဘလော့လေးကိုလုပ်ဖြစ်တာကနေ့အချိန်ထိပဲဆိုပါတော့ရှင်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာပါတော့တယ်။အိမ်ကလူတွေကလည်းအားပေးကြပါတယ် “စာမှာသာသူများနောက်ရောက်နေတာ...ဒါမျိုးကြတော့တော်သား”တဲ့ :)
မိတ်ဆွေတွေများလာလိုက်တာကနေ့မှာတော့ဖြင့်ကျွန်မမိတ်ဆွေတွေဟာဖြင့်လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်.....းP ဒါကြောင့်..ကနေ့အချိန်ထိကျွန်မဘလော့လေးအားမန့်၍သော်လည်းကောင်း၊စီဘောက်မှာအော်၍သော်လည်းကောင်း
သီတဂူစတား August 25, 2011 at 9:28 PM
တော်လိုက်တာ- သီတဂူစတား ပါလာလို့ppppppppppp
မိစံဆို သမီးစံကိုးး သိပါဘူး မောင်စံ ထင်နေတာ ppppppppp
ဟိုနှင်း ဒီနှင့် သတိထားနှင်းနော် ရှေ့မှာ ဟိုဟာရှိတယ်၊ ရွှေပုံကြီးရှိတယ်ပြောတာပါ pppppppppp
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 25, 2011 at 10:01 PM
အစ်မတို့လည်း သမီးစံတို့လို ဘာမှမသိ ဘာရေးရမှန်းမသိတဲ့ အနေအထားကနေ စလာကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်
ဇွဲရှိရင်၊ မပျင်းရင်၊ စာရေးချင်စိတ်ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘလောဂ့်လောကမှာ နေရာတစ်နေရာ ရလာမှာ သေချာပါတယ်။
ဇော်သိင်္ခ August 25, 2011 at 10:11 PM
ဘလော့င်္ဂဒေး လေး ဖတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ။ Memory က 1 G ဆိုတော့အများကြီးမှတ်မိသားပဲနော်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် အဲလောက်ကို မှတ်မိဘူးဗျ။ 512 လောက်ပဲ ရှိတာဆိုတော့လေ.. :)
ဟဲဟဲ.. 512 ပဲပြောတာနော်.. G လား M လား kb လား တော့တိဝူးဗျ... :P
KMC@ချင်းလေး August 25, 2011 at 10:33 PM
သေးတယ်ထင်လို့အေးဆေးဖတ်မယ်ဆိုပြီးအာလူးကြော်ထုတ်ထေ ဖာက်၊ပြန်လာပြီးအားရပါးရထိုင်ဖတ်မလို့မော့စ်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်တာ ''ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်ဒီပို့စ်လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။'' ဆိုတာလေးနဲ့ တန်းညားတော့တာပဲဗျို့..:P ပိုင်မှပိုင်ပဲ..။ အားကျပါပေ့ဗျာ..။
ချယ်ရီမြေ August 25, 2011 at 11:30 PM
လသားလေးရှိသေးတဲ့သမီးစံရေ စီဘောက်ကနေ အားဖြည့်အချိုရည်တွေ အမြဲလာတိုက်ပါ့မယ်... နိုင်နိုင်းစနေတို့လို၊ ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)တို့လို ဖောင်းကားလာအောင်လို့ (ပရိသတ်တွေ)၊ သီတဂူစတားပြောတဲ့ ရှေ့မှာ ရွေတောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သမီးစံရဲ့ ပရိတ်သတ်ကိုပြောတာနေမှာ...နော်...နှင်းသာနှင်း...
SHWE ZIN U August 26, 2011 at 8:16 AM
ရေးတာ ချစ်စရာလေး .. ညီမရဲ့ ဘလော့ဂ်လေး နှစ်ပေါင်း များစွာ အဒွန့်ရှည်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးတယ်...
ဘလော့ဂါ မောင်နှမ များနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆက်လက်ချီတက် ကြမယ်နော်....
Anonymous August 26, 2011 at 9:52 AM
jasmine(တောင်ကြီး) August 26, 2011 at 3:20 PM
နောင်လဲ ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ စာတွေအများကြီး
အင်း တဂ် လို့ သာရေးရမှာ...
ဘာတွေရေးရမှန်တောင် မသိဘူး ကျွန်တော်ဘလောက်ကအရမ်းကို
နာမည်ကြီနေတယ်ဆို့ တော့:P
အမျိုးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပဲလာကြည့် ကြတာများလို့ လေ...
8Yar August 26, 2011 at 7:38 PM
ဟိုက်! တော်နောက်ကျသွားပါလား။ 8Yar တို့အိပ်ပုပ်ကြီးနေလို့ နောက်ကျပြီ။ ချောတီးနော် တမီးစံ၊ :P
ပြောတော့ ရေးတတ်ဖူး၊ ရေးတတ်ဖူးနဲ့ ရေးထားတာလည်းကြည့်အုံး "မအိပ်မနေ..ခြင်ကိုက်သေ" တဲ့ ဟီး.... အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကျွန်တော် နာမည်လေး အမှတ်တရထည့်ရေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါဗျာ။ သမီးစံ ဘလော့လေး ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေလို့ 8Yar ကတောင်းဆုပြုလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ :)
mstint August 27, 2011 at 10:32 AM
ဘလော့ဂ်ဒေးအမှတ်တရလေး ဖတ်သွားတယ် သမီးစံရေ။
အန်တီတို့လို ဘလော့ဂ်ဂါဘဝကို ရောက်လာသူတိုင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စမ်းတဝါးဝါး လျှောက်လှမ်းရင်း အတွေ့အကြုံလေးတွေယူပြီး အခွင့်အခါပေးသ၍ လက်တွဲမဖြုတ် လျှောက်လှမ်းကြပါစို့နော်။
နွေလ February 3, 2012 at 10:49 AM
စာတွေရှာဖတ်ရင်းနဲ့ Blog Day ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ post လေးတစ်ခုကို သွားတွေ့တယ်
Blog ဆိုတဲ့ နာမည်ကြားတာနဲ့ မောင်နွေလတို့က စိတ်ဝင်စားပါတယ်
ဖတ်လိုက်တော့ Blogger တစ်ယောက်ရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ တွေ့ရတယ်